Orinasa fanaka Ho amidy sy manofa in Singapore
SG mg Hiditra
View Orinasa fanaka Published 3 years ago
Misafidiana sokajyResidential homes Houses CondosCommercial Real Estate Industrial premisesBusiness Directory Financial Service Providers Home Improvement Contractors Furniture Companies
Singapore ((mihainoa)), amin'ny fomba ofisialy ny Repoblika Singapore, dia firenena manana fanjakana masiaka indrindra any Azia Atsimo Atsinanana. Any amin'ny ilany avaratra (137 kilometatra na 85 kilaometatra) any avaratry ny ekoatera izy io, miainga amin'ny tendron'ny atsimo amin'ny saikinosy Malay, manakaiky ny zoro Malacca ka miankandrefana, ny Nosy Riau any atsimo, ary ny Ranomasina Chine atsimo ny atsinanana. Ny faritry ny firenena dia ahitana nosy iray lehibe, nosy satelika 63 ary nosikely iray, faritra iray mitambatra izay nitombo 25% nanomboka ny fahaleovantenan'ny firenena vokatry ny tetikasa famerenana tany betsaka. Ilay firenena dia fonenan'ny mponina 5,7 tapitrisa, 61% (3.4 tapitrisa) izay teratany Singaporeana. Misy fiteny ofisialy efatra ao Singapore: anglisy, Malay, sinoa ary Tamil; miaraka amin'ny anglisy ny fiteny lingua franca sy ny fiteny Malay ho fiteny nasionaly. Hita izany amin'ny fahasamihafana ara-kolontsaina manan-karena sy ny fandroana ara-poko ary ny fety lehibe. Ny multiracialism dia miorina amin'ny lalampanorenana, ary manohy mamolavola ny politikam-pirenena amin'ny fanabeazana, trano, ary politika. Na dia mijanona hatramin'ny alalàn'ny taonany aza ny tantarany, i Singapore Stamford Raffles dia nanangana ny tantaran'ny Fanjakana anglisy. Tamin'ny 1867, ny zanatany tany Azia Atsinanana dia nalamina indray ary i Singapore dia teo ambany fifehezana mivantana an'i Grande-Britane ka tafiditra tao amin'ny Faritra Fitantanana. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia nofehezin'i Japon i Singapore tamin'ny 1942 saingy niverina tany amin'ny fifehezana Britanika ho zanatany satroboninahitra tafasaraka taorian'ny fanoloran-tena tany Japon tamin'ny 1945. Nahavita nitantana tena i Singapore tamin'ny taona 1959, ary tamin'ny 1963 dia lasa ampahany tamin'ny federaly vaovaon'i Malaysia, niaraka tamin'ny Malaya, Borneo Avaratra, ary Sarawak. Ny tsy fitoviana ideolojika dia nitarika an'i Singapore voaroaka tao amin'ny federasiona roa taona taty aoriana, ka lasa firenena mahaleo tena izy. Taorian'ny tafiam-pahataonan'ny korontana tany am-piandohan'ny taona, ary na dia teo aza ny tsy fananana harena voajanahary sy ny tany niharam-boina, dia nandroso haingana ny firenena mba ho lasa iray amin'ireo Four Azia Tigers miorina amin'ny varotra ivelany, lasa firenena mandroso ary laharana faha-9 ao amin'ny UN UN Development Development Index, izay avo indrindra any Azia, ary manana ny GDP faha-7 avo indrindra amin'ny kapita eran'izao tontolo izao. I Singapore irery no firenena any Azia izay manana isa fiandrianana AAA avy amin'ny masoivoho lehibe indrindra. Izy io dia toeram-pandrosoana ara-bola sy fandefasana fandefasana, napetraka hatrany amin'ny tanàna lafo vidy indrindra nanomboka tamin'ny 2013, ary voamarika ho toerana fandoavana hetra. Napetraka ao anatin'ny fambara sosialy lehibe i Singapore: fanabeazana, fikarakarana ara-pahasalamana, kalitao fiainana, fiarovana manokana ary trano, miaraka amin'ny taham-pahafahana trano izay 91%. Ny Singaporeana dia mankafy ny iray amin'ny fiainana antitra indrindra amin'ny fiainana an-tany ary ny iray amin'ireo trangana fahafatesan'ny zazakely ambany indrindra eran'izao tontolo izao.Singapore dia repoblika parlemantera mitambatra iray ary rafitra Westminster an'ny governemanta parlemantera unicameral. I Singapore dia heverina fa manana fanjakana tsy mety sy mendrika, miaraka amin'ny fitsarana ara-drariny sy hentitra tsara. Na dia manao fifidianana madio aza ny firenena, ny fanjakàna dia manana fifehezana lehibe amin'ny politika sy ny fiarahamonina, ary ny antoko mihetsika avy amin'ny vahoaka dia nanjaka hatry ny fahaleovantena. Iray amin'ireo dimy mpikambana mpikambana ao amin'ny ASEAN, i Singapore no foiben'ny sekretera miafara-toekarena Asia-Pasifika (APEC) Sekretera Miara-miasa sy Fikambanana Ara-toekarena Pasifika (PECC), ary koa ny fihaonambe iraisam-pirenena sy hetsika maro. I Singapore dia mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana, Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny varotra, Fihaonan'ny Asia Atsinanana, Hetsika tsy voafehy ary ireo Vondron'olona iraisan'ny firenena.
Sokajy rehetraTrano fonenanaFananana varotraBusiness Directory